Dal caan ka ah dunida oo laga waayey Internet! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dal caan ka ah dunida oo laga waayey Internet!
23rd December 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Khuburadu waxa ay sheegayaan in Waqooyiga Kuuriya ay soo wajahday cilado internet oo aan horay loo arag, iyada oo qaar ay sheegayaan in dhamaan Oline-kii uusan shaqaynaynin.
Arrintani waxa ay imaanaysaa kaddib markii Washington ay sheegtay in ay qaadi doonto jawaab u dhiganta weerarkii Internetka ee lagu qaday shirkadda Maraykanka ee Sony Pictures, shirkadaas oo samaysay filimkii shactirada ama madadaalada ahaa ee laga matalay hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un.
Shirkada SONY qeybteeda soo saarta Aflaamta lagu sameeyo Maraykanka ee Hollywood ayaa horay joojisay filim lagu matalayo in la khaarajinayo Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim jong Un.
Filimkan oo loogu magacdaray (The Interview) ayaa ah mid maaweelo iyo qosol ah ayaa lagu matalayaa rag suxufiyiin iska dhigaya oo ay sirdoonka Maraykanka CIA u dirayaan dalka Kuuriyada Waqooyi si ay u khaarajiyaan hogaamiyaha dalkaasi.
Shirkada SONY ayaa waji gabax kala kulantay kadib markii kooxda jabsatay Computeradooda ay internetka ku faafiyeen Qoraalo Email- ah oo ay is dhaafsadeen madaxda shirkada SONY iyo Soosaarayaasha Filimaanta kuwaasi oo qaarkood xamanayey ama aflagaadeenayey qaar kamid ah Atoorayaasha iyo Atiriishooyina filimaanta jila.
Waxaa kamid ahaa qoraalada la shaaciyey Email mid kamid ah maamulka sare ee SONY ay ku dhaliilayso Madaxweyne Barack Obama inuu kaliya daawado filimaanta Madowga ka hadlaya, taasi oo ku khasabtay SONY inay raali gelin ka bixiyaan.
Kooxda weerarka ku heysa SONY ayaa sidoo kale sheegtay inay si lacag la’aan ah Internetka ugu faafin doonaan Filimaan ay shirkada SONY sameysay oo ay kala baxeen computeradeeda oo uu ku jiro filimka cusub ee James Bond (The Spectre).
Intaas kuma ekaan, kooxdan ayaa hanjabaad kale la timid iyagoo sheegay in hadii SONY shaaciso filimka (The Interview) ay weerari doonaan Shaneemooyinka lagu soo bandhigo filimkan.
SONY ayaa shaacisay inay hakisay soo bandhigida filimka iyadoo ay muuqato inay saameyn yeelatay hanjabaadii ka timid kooxda jabsatay Computerada shirkadaasi.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa sheegey in shirkadda Sony Pictures ay ku dhacdey gef iyo khalad kadib markii ay joojisey bandhigga filimkii maaweelada ahaa ee The Interview.
Alshabaab oo nin ku toogtay gobolka Shabeellaha Dhexe
Gaas oo dood ka qaba heshiiskii Jabuuti “Cid gaar ah kuma takrifali karto arrimaha Masiiriga ah”